Adtivity: သင်၏လူမှုမီဒီယာကြော်ငြာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 12, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Jenn Lisak Golding
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ခဲထုတ်ရန်ထူးခြားဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အွန်လိုင်းကြော်ငြာများသည်စျေးကွက်အတွင်းလွှမ်းမိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ inပြီလတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော“ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုညွှန်းကိန်း - လူမှုရေးကြော်ငြာ၏ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာသည်” အက်စပေ့စ်ဗွီ၏လေ့လာမှုကလူမှုရေးဂိမ်းများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ပျံ့နှံ့သွားသောကြော်ငြာသည်အခပေးရှာဖွေမှုထက် ၁၁ ဆပိုမိုထိရောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြွယ်ဝသောမီဒီယာကဲ့သို့ထိရောက်သော။
ရိုးရာအင်တာနက်ကြော်ငြာများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်သေတ္တာ (သို့မဟုတ်) နဖူးစည်းစာတမ်းကြော်ငြာများဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းယခုကဲ့သို့ကြော်ငြာများသည် CPMs နည်းပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ထိရောက်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ ၂၀၁၀ Harris Interactive မှစစ်တမ်းအရအင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်နဖူးစည်းစာတမ်းများကိုလျစ်လျူရှုထားကြသည်။ ၎င်းသည်လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူများသည်ကြော်ငြာများကိုအချိန်ပေးရန် (နှင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်သက်တမ်း!) အချိန်နည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော် ဆိုရှယ်မီဒီယာကြော်ငြာများသည်အွန်လိုင်းကြော်ငြာများကိုချဉ်းကပ်နည်းအသစ်တစ်ခုဖြင့်ကျန်းမာသော ROI တစ်ခုကိုပေးသည်။
Appssavvy ၏ဆွဲဆောင်မှုသည်လှုပ်ရှားမှုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာနည်းပညာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ရှိပြီးသားစာရင်းထဲတွင်နေရာလွတ် ၀ ယ်ခြင်းထက်အသစ်သောကြော်ငြာအခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်နိုင်သည်။
Adtivity ပလက်ဖောင်းသည်အသုံးပြုသူများကို၎င်း၏ကြော်ငြာကိုလက်ခံရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏အပြုအမူကိုခြေရာခံပြီးအသုံးပြုသူသည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအလယ်တွင်အနားယူချိန်တွင်ကြော်ငြာကိုပေးပို့သည်။ ၎င်းကြော်ငြာသည်အလုံးစုံသောအတွေ့အကြုံနှင့်ပေါင်းစပ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုပြသသည်၊ ကြော်ငြာများသည်အသုံးပြုသူအကြိုက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိစေပြီးအသုံးပြုသူအားအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်ကြိုးစားသည်။
စျေးကွက်သမားသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမက်ထရစ်များမှတဆင့်ကြော်ငြာများ၏ထိရောက်မှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ analytics နှင့်သုတေသန Adtivity ကထောက်ပံ့။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, စျေးနှုန်း, ဒါမှမဟုတ် Adtivity ကိုအသုံးပြု။ ကြော်ငြာတွေကိုစတင်ထုတ်ဝေရန်အတွက်ကျေးဇူးပြု။ သွားရောက်ကြည့်ရှု: http://appssavvy.com/#contact.
သင်၏လူမှုဖူလုံရေးစာမျက်နှာကို North Social နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ
andre Ibuspro ဖြစ်သည်
14:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 03
Yup။ SM နှင့်အတူအရာများအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် SMA ၏ပြောင်းလဲမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထိရောက်မှုရှိရန်အထောက်အကူပြုသောအကြံဥာဏ်များကိုသင်ရရှိခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။